Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Kenya oo qarax ku dhaawacmay | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Kenya oo qarax ku dhaawacmay
Warar kala duwan ayaa kasoo baxa qarax caawa Salaadii cisha kadib ka dhacay iridka hore ee laga galo Masaajidka Al-Hidaaya oo ku yaal xaafadda Soomaalida degto ee Islii, waxaana qaraxaasi dhaawac uu kasoo gaaray Xildhibaan laga soo doorto xaafadda Kamukunji ee Soomaalida degto iyo Toban kale.
Sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan xaafadda Islii qaraxa ayaa dhacay xiligii laga soo baxay Salaadii cishaha, iyadoo dad ku sugnaa xiligii qaraxa dhacayay Masaajidka Hidaaya ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid gacanta laga tuuray.
Wargeysta The Standard ee kasoo baxa Nairobi ayaa qoray isagoo soo xiganayo saraakiisha Booliska in qaraxu ahaa mid wadada dhinaceeda lagu aasay, inkastoo dadka ku tukuday Masjidka ay siyaabo kala duwan ugu hadleen.
Dadka ku dhaaawacmay ayaa waxaa loola cararay Isbitaalka Afueni ee ku yaal magaalada Nairobi, iyadoo dadka dhaawacmay qaarkood dhaawacooda ahaa mid daran.
Lama oga ujeedada qaraxa in uu ahaa mid lagu bartimaameedsanayay Madaxda deegaanka Soomaalida ee ku tukaneysay Masaajidka iyo in kale.
Waa qaraxii Labaad ee mud 24 saac gudahood ka dhaco Xaafadda Soomaalida degto ee Islii, iyadoo qaraxani midkii ka horeeyay uu dhacay xalay, waxaana ku dhintay hal qof, Sideed kalena wey ku dhaawacmeen.